Banyere Anyị - Dongguan JinRong Aliminum Products Co., Ltd
Dongguan JINRONG aluminum ngwaahịa CO., LTD. bụ ọkachamara emeputa ọkachamara nhazi aluminum alloy profaịlụ na support profaịlụ nke Ikanam tube na China.We Set ebu nnyocha na mmepe, imewe, aluminum miri nhazi na elu ọgwụgwọ na otu, anyị nwere a n'otu oru otu na-elu arụpụtaghị na elu ina mmepụta akara, All anyị ngwaahịa gafere ISO mba quality usoro asambodo.
Site mgbe niile rụọ ọrụ ka anyị ọrụaka ma ọhụrụ ability.We nọ na-eduga itie ke miri nhazi nke aluminum ngwaahịa na ọrụ ụlọ environmentally friendly elu ọgwụgwọ technology.Our aluminum ngwaahịa e n'ọtụtụ ebe etinyere na dịgasị iche iche na anụ ụlọ ahịa na exported na Singapore, Malaysia, Thailand, Germany na mba ndị ọzọ na mpaghara.
"Quality mbụ, aha mbụ" bụ anyị azụmahịa philosophy.We enye elu àgwà ngwaahịa na àgwà ọrụ ọhụrụ anyị na ndị agadi ahịa.
OEM / Customizing / machining Services N'ihi Ịhọrọ:
1.Design/Manufacture aluminum ebu, ime ebu ikpe
2.OEM na aluminum profaịlụ gị rịọ
3.we nwere ike inye Anodizing na elu ọgwụgwọ
4.we enye quality machining ma ọ bụ nhazi ọrụ ọnụ ahịa, dị ka ọnwụ, punching, zọ, na-egwu ala wdg
5.Any agba dị maka aluminum ihe
6.Design/package na aluminum akụkụ dị ka ndị ahịa rịọrọ
Nke a bụ ọhụrụ anyị Ndinam ngwaahịa.
Ọ bụrụ na ị na-mmasị na anyị producsts, ị nwere ike ịkpọtụrụ m site n'okpuru kọntaktị otú:
Ekwentị NO .: 0086 013713047317